पूँजी बजारका लागि मौद्रिक नीति, 'हात्ती आयो... हात्ती आयो... फुस्सा !'
ARCHIVE, POWER NEWS » पूँजी बजारका लागि मौद्रिक नीति, 'हात्ती आयो... हात्ती आयो... फुस्सा !'
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति नेपाली पूँजी बजारका लागि 'हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा !' जस्तै भएको छ । मौद्रिक नीतिले अपेक्षाकृत रुपमा नेपाली पूँजी बजारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो लगानीकर्ताले पोखेका छन्।
बैंकको तरलताको समस्यालार्इ हल गर्न प्रयास भएको जस्तो देखिएको छ । तर त्यसले खास ठुलो सकारात्मक असर बजारमा गर्दैन भन्ने पक्का छ । मार्जिन कललार्इ संबोधन गर्न खोजिए पनि ऋणको सिमा भने यथावत राख्न खोज्दा लगानीर्ताकोको माग सम्बोधन भएन ।
यो मौद्रिक नीतिले बजारमा सकारात्मक असर केहि पनि नपर्ने धेरैको बुझाइ छ । मार्जिन कलको सीमालाई २० प्रतिशतमा झारिएको भएपनि यसले लगानीकर्तालाई खास ठुलो राहत नदिने पक्का छ ।